Vezvirimwa Rice uye Karoti Burgers | Kicheni Mapepa
Burgers chikafu chinodiwa nevechidiki mumba. Zvakajairika kwavari kuti vadye mabhegi chaiwo hombe chikafu chinokurumidzaNekudaro, izvi hazvina hutano zvakanyanya kwavari sezvo zviri zvakakwirira mumafuta asina hutano.
Neichi chikonzero, nhasi isu tinobatsira vana idya zvine hutano nechikafu chaunoda, tichiaita nemaoko edu isu nezvikafu zvine hutano zvakadai semuriwo. Mune ino kesi, isu takatora mukana weiyo yakawanda yemupunga iyo yataive tasiya pane imwe yekudya yapfuura, kana iwe usina iyo yapfuura, iwe unogona kuteedzera chinongedzo kugadzira iyo nzira yemupunga chena uyu.
3 karoti diki.
200 g ye chena.
Kutanga, tichagura hanyanisi nemacarrots Mune madiki machubhu uye isu tichavaisa mune kadiki pani yekutsva ine yakanaka base yemafuta emuorivhi. Kana yadzikira uye hanyanisi yatora ruvara, tichabvisa pamoto uye toisa poaching iyi pane strainer kubvisa oiri yakawandisa.
Kune rimwe divi, iyo miriwo ichinge yakabakwa, tichava ne jena jena mundiro yakafara uye isu tichawedzera yakanaka yakati wandei yeki grated chizi, mazai maviri. Kukuchidzira zvishoma kuitira kuti izvo zvigadzirwa zvigoverwa zvakanaka.
Kana hanyanisi uye karoti zvadururwa, tora tichawedzera kumusanganiswa wemupunga ichimutsa zvekuti zvese zvinosanganisa uye isu tinowana musanganiswa wevangu burger.
Mushure mezvo, isu tichatora zvikamu zvemusanganiswa uyu uye isu tichagadzira bhora ratinozomhara kuita rairo hamburger chimiro. Isu ticharonga izvi pamapepa asinganyorwe mafuta toaisa mufiriji kuitira kuti vatore kusagadzikana.
Pakupedzisira, tichaita iyo hamburger mune skillet namafuta omuorivhi mashoma. Tichabika pamativi ese uye tichazvisuma muchingwa chakashambadzwa ichivaperekedza nemashizha eletisi, madomasi, zai uye chisi yakachekwa kana uchida.
Nguva yekubika 15 maminitsi
Yese nguva 35 maminitsi
Kilocalories pakushanda 204
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Special Recipes » Mapepa ane hutano » Mapunga emupunga
Choco meatballs mumuto